Monday, June 25th, 2018 - 18:58:08
Manchester United oo kusoo laabatay doonista Mats Hummels
0 Monday October 26, 2015 - 17:59:00
(Kubadbile) Kooxda Man UTD ayaa la xaqiijiyay inay soo laba kacleysay ayna dooneyso in bisha Janaury ay soo afjarto heshiis ay la gaarto daafaca kooxda BVB Mats Hummels.
Warbixin: Jose Mourinho waa la Eryi doonaa haddii laga badiyo kulanka Liverpool
0 Visits: 344 | Monday October 26, 2015 - 09:16:18
Jose Mourinho ayaa la eryi donaa haddii Chelsea la garaaco kulanka soo socda ee Liverpool ciyaar ka dhici doonta Stamford Bridge Sabtiga soo socda.
Pep Guardiola Oo Tababare Kooxeed Ka Noqonaya Magaalada London
0 Monday October 26, 2015 - 08:03:12
(Kubadbile) Tababaraha lagu magacaabo Pep Guardiola ayaa lasoo sheegayaa inuu ka noqon doono tababare magaalada London haddii ay kooxda Bayern Munich ka saxiixi weydo heshiis.
Arjen Robben oo farxad ku muujiyay goolkii uu soo laabashadiisa u dhaliyay Bayern
0 Sunday October 25, 2015 - 13:49:38
(Kubadbile) Arjen Robben ayaa farxad ballaaran ku muujiyay inuu gool dhaliyay soo noqoshadiisii horyaalka Bundesliga oo uu dhaawac muddo fog ah uga maqnaa kooxda Bavarians-ka.
Aqriso Dhammaan Kulamada Horyaalada waa weyn ee Yurub iyo Saacadaha la ciyaarayo oo is bedelay
0 Sunday October 25, 2015 - 07:45:16
(Kubadbile) Waxaa maanta iyo caawa garoomada qaaradda yurub gaar ahaan shanta horyaal ee ugu waa weyn ka dhici doona kulamo ka tirsan horyaaladaas.
Bayern oo Badisay Kulankeedii 1000-aad ee Horyaalka Germany & Natiijooyinka Kulamadii la ciyaaray ee Bundesliga
0 Visits: 336 | Saturday October 24, 2015 - 20:10:51
Kooxda Bayern Munich ee Horyaalka Bundesliga dalka Germany ayaa dhigtay Rikoor kale oo Horyaalkaas ah, markii ay badisay Kulankeedii 1000-aad ee Horyaalka inta uu jiray.
Draxler oo lacag ka doorbiday Juventus inuu u dhaqaaqo
0 Friday October 23, 2015 - 19:09:08
(Kubadbile) Juan Draxler ayaa go'aan ku gaaray xagaagan inuu u dhaqaaqo kooxda Wolfsburg intii uu qaban lahaa horyaalka Serie-A oo aad loogu saadaalinayay inuu ku biirayo kooxda difaacaneysa ee Juventus.
Maxay iska Shabahaan Madaxweyne Barack Obama & Jurgen Klopp Kulanka Rubin Kazan "Sawirro"
0 Thursday October 22, 2015 - 09:31:35
Liverpool ayaa wajihi doonta kooxda Russia ka socota ee Rubin Kazan tartanka Europa League Caawa, waxaana ay noqoneysaa Klopp oo markiisii u horreysay Liverpool ku hoggaamin doona Anfield.
Warbixin: Qaabka Loo Kala Hogaaminaayo Gooldhalinta Koobka Champions League
0 Thursday October 22, 2015 - 09:26:34
(Kubadbile)Waxaan halkaan idin kugu soo gudbineynaa qaabka loo kala hogaaminaayo gooldhalinta koobka Champions League iyadoo lagu guda jiro marxalada Group-yada.
Dhammaan Natiijooyinka Kulamadii Champions league ee xalay
0 Thursday October 22, 2015 - 08:32:24
Waxaan halkan idinkugu soo Gudbineynaa Dhammaan kulamadii Champions league ee xalay, Real oo Garab dhac gashay, Man Utd sidoo kale yaa badiyay?.
Wenger: Sanchez waxaa ka muuqday Daal, kulankii Bayern!
0 Wednesday October 21, 2015 - 09:33:20
Tababaraha Kooxda Arsenal ayaa sheegay in uu aad u daallanaa Laacibka dalka Chile kulankii ay 2-0 uga badisay kooxdiisu Bayern Munich tartanka Champions League.
Ancelotti: Arsenal mar hore ayey ka hartay Champions League 2015/16
0 Tuesday October 20, 2015 - 10:17:44
Ancelotti oo heshiis la galay Goal.com si uu ula falanqeeyo Champions League, waxaa uu sheegay in Arsenal ay horay uga dhacday Champions league, Labada Lugood ee Bayern Munich, ayadoon Gunners weli guul arag ayaa ah Sababta aysan ku gaari karin 16-ka.
Messi & CR7 oo hoggaaminaya Ballon d'Or Tartankiisa, yaa kale oo ku jira 23-ka xiddig ee Loollamaya?
0 Tuesday October 20, 2015 - 09:51:10
Labada Laacib ayaa heysta muddo kooban gudaheed 7 mar Abaal marintan, haddana waxaa ay ka mid yihiin kuwa ugu cad-cad 23-ka Laacib ee isugu soo haray Tartankeeda.
Falanqeynta Arsenal Vs. Bayern Munich, maxaadan ka ogeyn Kulanka?
0 Tuesday October 20, 2015 - 08:59:09
Arsenal ayaa doo dhoweyn doonta Bayern Munich Group F kulan ka tirsan Champions League Caawa, waxayna dooneysaa in ay kasoo kabato Laba qasaare oo ay ku furatay Tartanka.
Wenger: Waan garanayaa sida loo joojin karo Lewandowski
0 Tuesday October 20, 2015 - 08:59:03
Kooxda Bayern Munich Weeraryahankeeda ayuu hseegay Tababaraha Faransiiska ah in ay xakameyn doonaan, kulanka Talaadada ee Labada Kooxood dhex mari doona.
Bayern Munich oo London gaartay ka hor 24 saac waqtigii la filayay
0 Monday October 19, 2015 - 15:01:17
(Kubadbile) Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa diyaar u ah kulanka adag ee tartanka Uefa Champions League ay ku wejahayso kooxda Arsenal, Iyadoo 24 saacadood ka hor waqtigii la sugayay gaartay magaaladda London.
Lewandowski: Yaan leyla meeldhigin Messi & Ronaldo
0 Monday October 19, 2015 - 11:36:13
Kooxda Bayern Munich Weeraryahankeeda ayaa sheegay in aysan isku meel imaan karin, isaga iyo Laacibiinta waayihii dambe ee Adduunka.
Arsene Wenger: oo Wacad ku maray in ay Weerar ku harqin doonaan Bayern Munich
0 Monday October 19, 2015 - 10:41:36
Arsene Wenger ayaa sheegay in Arsenal ay kaliya ciyaari doonto "Bandhigga sarreeya" taasoo ay Gunners ku garaaci karto Bayern Munich kulanka Emirates ee Champions League oo ay rajadooda kusoo Nooleyn doonaan.
Ancelotti oo Guardiola ka bedelaya shaqada Bayern Munich
0 Sunday October 18, 2015 - 18:23:45
(Kubadbile) Bayern Munich ayaa lasoo werinayaa inay indhaha ku hayaan inay lasoo saxiixdaan layliyihii hore ee Real Madrid Carlo Ancelotti iyadoo uu shaki ku jiro maamulaha kooxdan ka dhisan Allianz Arena Pep Guardiola oo laga yaabo inuu kooxda isaga dhaqaaqo.
Bayern: Waa kooxdii u horreysay ee 9-ka Kulan ee u Horreeya Horyaalka Germany Badisay, Taariikhda
0 Sunday October 18, 2015 - 11:28:13
Bayern Munich ayaa badisay Dhammaan Kulamadii 9-ka ahaa ee u horreeyay Horyaalka Bundesliga xagaagan markii ay 1-0 uga badisay Werder Bremen, Rikoor kale oo weyn ayey dhigtay muxuu yahay?.